စက်မှု Seekeed Dehydator နှင့် dehumidifier dphg150s-x | Twesix
အပူချိန်အပူချိန်အခြောက်ခံစက်များအားအနည်းဆုံးစက်မှုလုပ်ငန်းများ၌ခြောက်သွေ့စေရန်အောင်မြင်စွာလျှောက်လွှာတင်ခြင်းဖြင့်ပင်လယ်စာအပူစုပ်စက်အခြောက်ခံစက်များအသုံးပြုရန်ရွေးချယ်ပါ။ Kelp ခြောက်သွေ့ခန်းတွင်ထုတ်လုပ်သော Kelp သည်ပြားချပ်ချပ်မဟုတ်သောစေးကပ်သော, အစာရှောင်ခြင်း, ခြောက်သွေ့သော Kelp သည်အရည်အသွေးနှင့်အရောင်စည်းကမ်းများအရခြောက်သွေ့သော kelp ထက်သာလွန်သည်။
Kelp ခြောက်သွေ့လာသောအခါအဓိကပြ problems နာများစွာရှိသည်။
1. ထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေနှင့်ရေဓာတ်ခန်းခြောက်သော Kelp ၏ပြ problems နာများ။ လက်ရှိအချိန်တွင်ရေဓာတ်ခန်းခြောက်ထုတ်ထုတ်လုပ်မှုအများစုသည်ရိုးရာခြောက်သွေ့သောခြောက်သွေ့သောမီးနှင့်ခြောက်သွေ့သောနည်းလမ်းကိုလက်ခံသည်, အောက်ပါပြ problems နာများရှိသည်။
1. အပူအပူချိန်ကအရမ်းမြင့်တယ်။ ရိုးရာခြောက်သွေ့သောနည်းပညာဖြင့်အပူချိန်ကိုထိန်းချုပ်ရန်မလွယ်ကူပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့်အပူချိန်သည် 75-90 ℃ဖြစ်ပြီးခြောက်သွေ့သောဟင်းသီးဟင်းရွက်များခြောက်သွေ့သောဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၏ခြောက်သွေ့သောလုပ်ငန်းစဉ်သည်ခြောက်သွေ့သောအပူချိန် 65 ℃ထက်မပိုသင့်ကြောင်းလိုအပ်သည်။
2. ခြောက်သွေ့သောအချိန်သည်ကြာလွန်းသည်။ ရိုးရာနည်းလမ်းများအသုံးပြုခြင်းသည်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တစ်တန်ကိုအနည်းဆုံး 24 နာရီကြာသည်။ ထို့ကြောင့်ပင်အပူခန်းခြောက်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းကြောင့်ရံဖန်ရံခါအပူနှင့်ခြောက်သွေ့မှုများကိုရံဖန်ရံခါဖြစ်ပေါ်စေသည်။
3. ကြီးမားသောစွမ်းအင်သုံးစွဲမှု။ ရိုးရာခြောက်သွေ့မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်အပူစွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်ခြင်း, 30% -60% ခန့်ရှိသည်။ ခြောက်သွေ့ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းအစိုဓာတ်ကိုခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့်အစိုဓာတ်ကိုခြောက်သွေ့စေသည့်အပူသည် 36% ခန့်ရှိပြီးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှုသည် 58% ခန့်ရှိသည်။ ခြောက်သွေ့သောပစ္စည်းများသည်အပူနှင့်ခြောက်သွေ့သောအပူကိုယူသည်။ ဆုံးရှုံးမှုသည် 2% နှင့် 2% အသီးသီးရှိပြီးအပူစွမ်းဆောင်ရည်သည် 40% သာရှိသည်။
Twesix Heat Pump Sprerer က Seaweed ကိုဘယ်လိုခြောက်သွေ့ရမလဲ
ပထမအဆင့် - အပူစင်မြင့် - Kelp ကို trollings များပေါ်သို့ဆွဲချနိုင်သည်သို့မဟုတ်ဗန်းများထဲသို့ထည့်နိုင်သည်။ တံခါးကိုပိတ်လိုက်ပါ, ခြောက်သွေ့သောအခန်းတွင်ခြောက်သွေ့သောအခန်းထဲသို့ 50 ℃, 1.5-3 နာရီကြာအပူပေးပါ။ ခြောက်သွေ့ခန်းတွင်အစိုဓာတ်ရှိသည့်အခါအစိုဓာတ်သည်ယိုစီးလာလိမ့်မည်။ အစိုဓာတ်ကို2မိနစ်ခန့်ကြာလိမ့်မည်။ အစိုဓာတ်ကိုညှစ်ပြီးနောက်ခြောက်သွေ့သောအခန်း၌အပူချိန် ကျလိမ့်မည် ပြီးနောက် ဆက်လက်အပူဆက်လက်။
ဒုတိယအဆင့် - အဆင့်နှစ်ဆင့်ခွဲခြားထားသင့်သည့်စဉ်ဆက်မပြတ်ခြောက်သွေ့သောခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့် damp-ဖယ်ရှားရေးအဆင့် - မြင့်မားသောစိုထိုင်းဆနှင့်အပူချိန်, အလယ်အလတ်စိုထိုင်းဆနှင့်အလယ်အလတ်အပူချိန်။ စိုထိုင်းဆမြင့်မားခြင်းနှင့်အပူချိန်နိမ့်ပိုင်းတွင်အပူချိန်သည် 60 ℃ထက်နည်းသည်, အကွာအဝေးမှာ 55-60 ℃ဖြစ်သည်။ ပစ္စည်းအရောင်ပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအပူချိန်နှင့်စိုထိုင်းဆကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုပစ္စည်း၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိရေငွေ့ပြောင်းလဲမှုကိုကြည့်ရှုပါ။ ဒီအချိန် 3-3.5 နာရီဖြစ်သင့်သည်။ စိုထိုင်းဆနှင့်အလယ်အလတ်အပူချိန်အခန်းတွင်အပူချိန် 60 ℃ထက်နည်းပြီးအကွာအဝေးမှာ 50-60 ℃ဖြစ်သည်။ ဤအပိုင်းတွင် Air Intelet Valve ကိုဖွင့်ပြီး Reward Air Valve ကိုအစိုဓာတ်ဖယ်ရှားခြင်းအတွက်စနစ်တကျပိတ်ထားနိုင်သည်။ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပမာဏနှင့်အညီကျိုးကြောင်းဆီလျော်ညှိ။
အဆင့်သုံးဆင့် - အရှိန်အဟုန်မြင့်ခြင်းနှင့်အပူချိန်နိမ့်ပိုင်းအဖြစ်လူသိများသောမြန်နှုန်းလျှော့ချခြင်းနှင့်ပုံဖော်ခြင်းအဆင့်သည် 70-80 ℃ဖြစ်သည်။ 70-80 ℃ထက်မပိုသင့်ပါ။
ပင်လယ်စာအပူစုပ်စက်အခြောက်ခံစက်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ခြောက်သွေ့သောပင်လယ်ရေညှိသည်အရည်အသွေးမြင့်မားခြင်း, ပင်လယ်စာအပူစုပ်စက်အခြောက်ခံစက်သည်ထိရောက်သောပြောင်းလဲခြင်း, အပူချိန်ညှိနှိုင်းမှုနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်သဘာဝအပူချိန်ကို အသုံးပြု. တစ်ချိန်တည်းတွင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။